Yemen Faritra Tsy Azo Isidinana : Yemenita An’arivony No Mihitsoka Any Ivelany · Global Voices teny Malagasy
Yemen Faritra Tsy Azo Isidinana : Yemenita An'arivony No Mihitsoka Any Ivelany
Voadika ny 03 Avrily 2015 1:49 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Nederlands, Español, Deutsch, English
Seranam-piaramanidina ao Sana'a. Sary: yemenfox.net
Miditra amin'ny andro fahaenina ny daroka an'habakabaka Saodiana, Yemenita an'arivony no tafahitsoka ao amin'ireo seranam-piaramanidina manerantany, ary tsy misy ny fanantenana hiverenana an-tanindrazana haingana. Noho ny fanakatonana ny faritra an'habakabaka ao Yemen no anton'izany, na No Fly Zone (Faritra Tsy Azo Isidinana).
Niantraika tamin'ireo Yemenita any ivelany ity No Fly Zone ity, ka tsy afaka miverina ao Yemen izy ireo amin'izao fotoana izao, na miala ny faritry ny seranam-piaramanidina ihany koa noho ny antony maro samihafa. Misy amin'izy ireo no lany daty ny visa, ny sasany kosa efa ho lany vola, ka mahatonga azy ireo ho voakenda ao amin'ireo seranam-piaramanidina manerana izao tontolo izao izy ireo.
Nanomboka nisioka ity olana maha-olombelona mahazo ireo Yemenita an'arivony any ivelany ity ireo mpikatroka Yemenita tamin'ny fampiasana diezy #StrandedYemenis sy amin'ny teny arabo hoe #يمنيون_عالقون mba ho fanentanana.
Khaled al-Hammadi, filohan'ny Freedom Foundation (Fikambanan'ny Fahalalahana) ho amin'ny Zon'ny Fampitam-Baovao Halalaka ao Yemen nisioka hoe:
Mila fanampiana vonjimaika ireo Yemenita an'arivony tafahitsoka manerana ny faritra. Sahirana amin'ny ady ny GCC ary manadino ny olana maha-olombelona
Ampio amin'ny fampielezana ny diezy #Stranded_Yemenis azafady mba hanampiana azy ireo hampitsahatra ny toe-javatra mahaonena mahazo azy ireo manerana ny faritra nanomboka tamin'ny 15/3/2015
Nisioka ihany koa i Ahmad Ja'dan hoe:
Zava-doza tanteraka hoan'ireo Yemenita any ivelany! Tsy afaka miverina mody ao Yemen izy ireo noho ny faritra tsy azo isidinana
Nanentana ireo firenena mifanolo-bodirindrina ihany koa ny mpikatroka mba hanome visa 72 ora hoan'ireo Yemenita tafahitsoka, Noon_Nosa nisioka hoe:
Manentana ireo firenena mifanolo-bodirindrina tahaka an'i Arabia Saodita sy Oman izahay mba hanome visa 72 ora hanamoràna ny fodian'ireo Yeminita tafahitsoka any ivelany
Noon Arabia, bilaogera sady mpiara-manorina ny Support Yemen nisioka hoe:
Ankoatra ny olan'ny visa lany daty, tsy maintsy miatrika ireo fandaniana hafa tsy maintsy aloàny mandra-piverina any Yemen ihany koa ireo Yemenita tafahitsoka.
Tafahitsoka ao amin'ireo seranam-piaramanidina manerana izao tontolo izao ny Yemenita. Simba ary nikatona ny seranam-piaramanidinay, ary firenena marobe ankehitriny no manomboka mitaky visa fidirana. Mangataka amin'ireo firenena ireo izahay mba hanamora ny fodian'izy ireo.
Namoaka tatitra mampiseho fijoroana vavolombelona avy amin'ireo Yemenita tafahitsoka ao Djibouti ny Al Jazeera.
Niantraika tamin'ireo olom-pirenena hafa tahaka ny Indiana sy ny Pakistaney ao Yemen ihany koa ity olana ity izay tsy nahavita nitady lalana ivoahana hiverenana ho any amin'ny firenen'izy ireo. Tamin'ny Alahady, rehefa nanaiky hampitsahatra ny daroka an'habakabaka mandritra ny roa ora ny Saodiana, nahavita niala tao Yemen miaraka amin'ny mpandeha Pakistaney 500 tao anatiny ny voromby Pakistaney iray.
Fianakaviana Pakistaney, tafavoaka tao #Yemen notsenain'ny fianakaviana tamin'ny fahatongavany tao amin'ny Seranam-piaramanidina Jinnah Intl ao Karachi – avy amin'ny @FatimaAli52
Araho hatrany ny fivoaran'ny vaovao ao Yemen